Turkiga & Ruushka oo ay markale ka tafatay! (Maxaa la isku qabtay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga & Ruushka oo ay markale ka tafatay! (Maxaa la isku qabtay?)
Turkiga & Ruushka oo ay markale ka tafatay! (Maxaa la isku qabtay?)
(Moscow) 19 Feb 2020 – Turkey iyo Russia ayaa is dhaafsaday hadallo kul kulul maanta oo Arbaca ah ka dib markii Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku hanjabay in uu weerar ku qaadi doonno Syria, si loo dhameeyo waxa ay Ankara ugu yeertay howlgallada arxandarrada ah ee ciidamada Syria ay ka wadaan gobolka Idlib.
Previous articleXukuumadda Somalia oo dayactir ku bilowday Xarun cusub oo ay u guurayso + Sawirro
Next articleGobolka Banaadir oo qaaday tillaabo NAADIR ah oo aad loogu baahnaa!